किसान विधेयक जारी गराउन जनमत पार्टीको किसान र्‍याली (फोटोफिचर)
२०७८ पौष ३० शुक्रबार १८:०२:००
जनमत पार्टीले सिराहामा किसान र्‍यालीको आयोजना गरेको छ । किसानको हकहितका लागि ११ सूत्रीय माग पूरा गर्न किसान विधेयक ल्याउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको आन्दोलनकारीको माग छ ।
र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले जारी किसान आन्दोलनको माग पूरा गर्न किसान विधेयक ल्याउनुको विकल्प नभएको बताए । मलखाद्य र बिउबिजन माग्ने किसानमाथि सरकारले गोली चलाएको भन्दै सरकारी रबैया किसान विरोधी भएको बताए ।
उनले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई महाभारतको जरासंधको संज्ञा दिएका छन् । स्थानीय सरकार महाभारतको जरासंध भएकोले बलराम जस्तै हलो उचालेर जरासंध जस्तो प्रवृृतिको अन्त गर्नुपर्ने डा. राउतले बताएका छन् । ‘जरासंधलाई बलरामले हलो उठाएर अन्त गर्‍यो,’ उनले भने,‘स्थानीय सरकारमा मौलाएको जरासंध प्रवृत्ति किसानले आफ्नो शक्ति देखाएर अन्त गर्नुपर्छ ।’
जनमत पार्टी सप्तरीका संयोजकसहित १४ कार्यकर्ता पक्राउ
इन्जिनियरलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र